Bangiyada ugu Fiican Connecticut CT ee 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Ganacsi Connecticut sanadka 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Talaabo-Talaabo
Kuwa jecel inay ganacsi ka bilaabaan Connecticut, maqaalkani wuxuu si fiican kuugu hagi doonaa habka tallaabo-tallaabo ee diiwaangelinta meheradda Connecticut.
Sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay Phoenix Marketing International, Connecticut waxay lahayd tirada saddexaad ee ugu badan ee milyaneerrada qof kasta oo Maraykanka ah, oo leh saamiga 7.75%.
Iyada oo ah meesha 9aad ee ugu wanaagsan ee laga heli karo raasamaalka guud ee qaranka, Connecticut waa meel aad u fiican oo lagu bilaabo ganacsigaaga. Ku bilow meheraddaada maanta tusaheena tallaabo-tallaabo ee fudud oo ku soco waddada degdegga ah ee madaxbannaanida maaliyadeed iyo mid shaqsiyeed.
Xaqiiqooyin Degdeg ah oo ku saabsan Connecticut
Iyada oo leh kheyraad dabiici ah oo kooban, muwaadin aqoon leh oo hal-abuur leh ayaa u suurta geliyay Connecticut in ay gaarto wax soo saar heer sare ah. Hal -abuurka hal -abuurka ee Connecticut — oo ka dhex muuqda hal -abuurayaasha sida Eli Whitney, Samuel Colt, iyo Charles Goodyear — wuxuu soo saaray tiro badan oo ikhtiraacyo muhiim ah iyo shatiyo.
Gobolka waxaa loogu magac daray Wabiga Connecticut, oo kala qeybiya gobolka waana webi weyn oo ku yaal Mareykanka
Bishii Ogosto 22, 1902, Theodore Roosevelt wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah oo gaari ku raaca inta uu xilka hayo.
Connecticut waxay leedahay 169 magaalo, 21 magaalo, iyo 9 degmo.
Gobolka Dastuurku wuxuu hoy u yahay Samuel Colt, oo ah curiyaha curiyaha.
Connecticut waxay leedahay dakhliga shaqsiyeed ee ugu sarreeya qofkiiba (in ka badan $ 70,000) dalka. Si kastaba ha ahaatee, celceliska qaranka waa $ 50,392.
Waa maxay sababta aan ganacsi uga bilaabayo Connecticut
Iyadoo ay ka badan yihiin 500 oo shirkadood, bilowga hormuudka ah, hoggaamiyeyaal la aasaasay, hal-abuurayaal soo ifbaxaya, kheyraadka dabiiciga ah, kheyraadka dhaqanka, iskuulada heer qaran leh, iyo jawi shaqo oo wax soo saar leh oo ku yaal Connecticut, gobolku wuxuu weli u furan yahay fikradaha asalka ah iyo fikirka cusub ee u oggolaanaya ganacsiyada inay horumar sameeyaan. Connecticut waxay caddeysay inay tahay goob ganacsi oo xoog leh sababahan soo socda:
Akhri ALSO: Sida Loogu Iibsado Beeraha Beeraha Maalgashiga Sanadka 2022 | Hagaha Khabiirka
Connecticut waxay udub dhexaad u tahay dhaqaalaha waqooyi -bari Mareykanka. Iyada oo si sahlan loo galayo Boston iyo New York, way ka kharash yar tahay in la gaaro saddex-meelood meel dhammaan dhaqaalaha Mareykanka iyo saddex-meelood laba ka mid ah suuqa Kanada halkaan.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Bilaabo Meherad New York 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Connecticut waxay ka mid tahay gobollada ugu sarreeya qaranka tayada nolosha. Dugsiyada dadweynaha ee waaweyn, xaafadaha muuqaalka leh, heerka dambiyada oo hooseeya, magaalooyin firfircoon oo weli la maareyn karo, helitaanka daryeel caafimaad oo gaar ah, iyo xulashooyin madadaalo oo kala duwan ayaa ah dhowr sababood oo dad badani ugu raaxeystaan ​​inay halkan ku noolaadaan.
Xoogga Shaqaalaha ee Gaarka ah
Shaqaalaha Connecticut waxay ka mid yihiin kuwa ugu xirfadda badan qaranka - wax soo saarna leh. Marka, haddii aad raadineyso inaad ku shaqaaleysiiso shirkaddaada tayo sare leh ama aad rabto inaad la shaqeyso kuwa aad xushmeyn karto oo aad wax ka baran karto, Connecticut waxay u tahay meel wanaagsan dadka wanaagsan.
Farshaxanka & Dhaqanka firfircoon
Connecticut waxay ku nooshahay farshaxanka-laga soo bilaabo qolalka farshaxanka ee qaranka iyo matxafyada ilaa tiyaatarka abaalmarinta iyo dhacdooyinka dhaqanka, laga soo bilaabo goobaha taariikhiga ah iyo goobaha riwaayadaha waaweyn ee lagu qabto xafladaha maxalliga ah iyo carwooyinka bulshada. Wax ka baro kala duwanaanshaha waayo -aragnimada Connecticut ay ku siiso.
Qaybaha Ganacsiga ee Koraaya
Muddo dheer loo yaqaan hoggaamiye wax soo saarka horumarsan, hawada hawada, maaliyadda, iyo caymiska, Connecticut sidoo kale waxay hoy u tahay waaxyo kobcaya cilmiga noolaha, tamarta cagaaran, tignoolajiyada, iyo warbaahinta dhijitaalka ah. Isku soo wada duuboo warshadaha sida xawliga u socda ayaa gobolka u dhigaya kobac sii socda.
Sida Loo Diiwaangaliyo Ganacsi Connecticut
Waxaad ka diiwaan gelin kartaa ganacsigaaga Connecticut online ama shakhsi ahaan. Si aad isaga diiwaan geliso khadka, waxaad u baahan tahay inaad lacag ka bixiso kaydkaaga ama akoonkaaga hubinta.
Ka dib markaad internetka iska diiwaan geliso, hubi inaad daabacday ogolaansho ku meel gaar ah oo aad ku shaqayn karto inta lagu jiro wakhtigaas.
Waxaad ku heli doontaa xidhmadaada diwaan galinta lambarkaaga diiwaangalinta cashuurta ee Connecticut 10-15 maalmood oo shaqo kadib. Guji halkan si aad ganacsi cusub uga diiwaangeliso internetka.
Haddii kale, waxaad shaqsi ahaan ka codsan kartaa xafiisyadooda goobta saacadaha shaqada. Si aad u dalbato, waxaad u baahan tahay inaad keento aqoonsi sawir iyo jeeg ama amar lacag oo khidmadda diiwaangelinta ah. Codsigan waa inuu saxeexaa milkiilaha shaqsiga, lammaanaha, sarkaalka shirkadda, xubin ka ah LLC ama qof kasta oo kale oo idman.
Khidmadda diiwaangelintu waa $100 khidmadda ogolaanshaha hal mar ah.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Connecticut: Diiwaangelinta Ganacsiga CT
Si aad ganacsi uga bilowdo Connecticut, waxaa jira tallaabooyin gaar ah oo aad u baahan tahay inaad dhegaysato. Laga soo bilaabo shatiyada iyo rukhsadaha ilaa canshuuraha iyo caymiska, baro waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad ganacsi uga bilowdo Connecticut.
#1 Dooro fikrad ganacsi
Kahor intaadan iska diiwaan gelin ganacsi gudaha Connecticut, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato nooca ganacsiga aad jeceshahay. Raadi fikrad ku habboon danahaaga, korriinka shakhsi ahaaneed, iyo awoodaha dabiiciga ah. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ku sii socoto wadada saxda ah oo aad qaadato go'aanka ganacsiga ugu fiican.
#2 Qor qorshe ganacsi
Iyada oo leh fikrad ganacsi oo fiican, waxaad u baahan tahay qorshe ganacsi oo adag si aad u taageerto.
Kahor intaadan ku bixin lacag aad u badan iyo ilo kale xagga ganacsigaaga, si taxaddar leh u falanqee fikraddaada oo samee qorshe ciyaar.
Qoritaanka qorshe ganacsi wuxuu kaa caawinayaa inaad isku xirto dhibcaha oo aad abuurto khariidad waddo oo hagta safarkaaga ganacsi.
#3 Dooro shirkad ganacsi
Hay'adda ganacsigu waxay tilmaamaysaa sida meheradda sharci ahaan loo aasaasay. Waxay muujinaysaa qaab dhismeedka sharciga ah ee shirkad.
Waxaa jira afar nooc oo meherad ganacsi: lahaansho gaar ah, iskaashi, shirkad iyo shirkad deyn xadidan leh (LLC).
Kartida kalifta: Ganacsigan hal nin ah ayaa ka mid ah kuwa ugu fudud uguna qaalisan afarta hay'adood ee ganacsiga. In kasta oo marxaladda bilowga ah ay noqon karto barta ugu weyn ee wax lagu iibiyo, haddana hoos u dhac weyn oo ku yimid milkiilaha kaliya ayaa ah in milkiilaha uu shaqsi ahaan mas'uul ka yahay deymaha iyo falalka shirkadda.
Si aad shirkad gaar ah uga samaysato Connecticut, uma baahnid inaad dawladda u fayl garayso wax dukumentiyo urur ah.
Shuraako: Hay'addan ganacsi waxay ka kooban tahay laba qof ama ka badan oo wada maamula meherad. Sida lahaanshaha gaarka ah, ma jiro buuxin rasmi ah oo dawladdu leedahay. Sidoo kale, sida lahaanshaha gaarka ah, iskaashigu wuxuu leeyahay mas'uuliyad aan xad lahayn.
Si aad iskaashi guud uga abuurto Connecticut, uma baahnid inaad u fayl garayso wax dukumentiyo urur ah gobolka. In kasta oo aan sharci ahaan loo baahnayn, dhammaan shuraakaduhu waa inay lahaadaan heshiis iskaashi oo qoran. Heshiiska wada -shaqayntu wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh haddii uu mar uun muran soo dhex -galo shuraakadu.
#4 Diiwaangeli magac ganacsi
Markaad dooratid hay'ad ganacsi, tallaabada xigta ee aad qaadi doonto waa inaad iska diiwaangeliso magac ganacsi.
Loogu talagalay LLC -yada iyo shirkadaha, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in magacaagu ka soocan yahay magacyada hay'ado ganacsi oo kale oo horay ugu jiray faylka Xoghayaha Connecticut (SOS). Waxaad ka hubin kartaa magacyada adoo samaynaya a raadinta cidda meheradda ee nidaamka SOS CONCORD.
Waxaad kaydin kartaa magac la heli karo 120 maalmood adiga oo xaraysanaya Codsiga Boos celinta Magaca. Waxaa jira shuruudo magac oo gaar ah oo loogu talagalay LLC -yada iyo shirkadaha (sida ay ku jiraan eray sida “LLC” ee LLC -yada ama “Shirkadda” shirkadaha).
Lahaanshaha gaarka ah ama shuraakada guud ee Connecticut, taasi miyay isticmaashaa magac ganacsi oo ka duwan magaca sharciga ah ee milkiilaha ganacsiga (ee ah lahaanshaha kaliya) ama magacyada lamaanayaasha gaarka ah (shirkad)?
Hadday sidaas tahay, waa inaad ka diiwaan gelisaa magac ganacsi karraaniga magaalada ama magaalada aad ka ganacsato. Macluumaad dheeri ah, ka eeg mareegaha magaalada ama magaalada ay khusayso.
Haddii aad qorsheyneyso inaad ganacsi ku sameyso internetka, waa inaad sidoo kale iska diiwaangelisaa magacaaga ganacsi sidii magac domain. Si looga fogaado arrimaha jebinta summadaha ganacsiga, ku dadaal inaad samayso jeegga summadaha federaalka iyo gobolka si aad u hubiso in magaca aad rabto inaad isticmaasho uusan la mid ahayn ama aad ugu eg magac hore loo isticmaalay. Eeg Sida Loo Sameeyo Raadinta Calaamadda Wixii macluumaad dheeraad ah.
#5 Qaado ruqsadaha iyo ruqsadaha
Ruqsado iyo ruqsado gaar ah ayaa loo baahan doonaa si looga ganacsado Connecticut, kuwa loo baahan yahayna waxay ku kala duwanaan doonaan hawlaha meheradda iyo goobta. Qaar ka mid ah diiwaangelinta guud waxaa ka mid ah:
Ruqsadaha Ganacsiga Guud - Ma jiro xaalad guud ee shatiga ganacsiga Connecticut; hase yeeshee, magaalooyin badan waxay u baahan yihiin ruqsad ganacsi si ay u shaqeeyaan.
Lambarka Diiwaangelinta Canshuurta Connecticut - Ganacsatadu waxay iska diiwaan gelin karaan Ogolaanshaha Canshuurta Iibka, canshuuraha haynta, iyo canshuuraha kale ee gobolka ee Waaxda Adeegyada Dakhliga ee Connecticut.
Ruqsadaha Ganacsiga - Adeegyada qaarkood sida dhakhaatiirta duugista, qorsheeyaha qoyska, naqshadeeyeyaasha muuqaalka, iyo farmashiistayaashu waxay u baahan yihiin ruqsad xagga Connecticut. In kasta oo tani aysan ahayn liisanka meheradda, shatiyeynta ayaa laga rabaa inay shaqeyso.
Ogolaanshaha Aaga - Magaalooyin iyo/ama degmooyin badan ayaa u baahan oggolaanshaha aagagga ka hor inta aysan meherad ka bixin meel, taas oo mararka qaarkood ay ka mid tahay guri ku saleysan ganacsiyada
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Guriga: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
#6 Hel EIN
Lambarka Aqoonsiga Loo-shaqeeyaha ama EIN oo sidoo kale loogu yeero Lambarka Aqoonsiga Loo-shaqeeyaha ee Federaalka ama FEIN waa lambar aqoonsi canshuureed oo sagaal god leh oo ay soo saartay Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS). Lambarkan wuxuu tilmaamayaa meherad ka shaqaysa Maraykanka waxaana loo isticmaalaa bixinta cashuurta mushaharka, xaraynta cashuur celinta, iyo qaar kaloo badan.
Haddii meheraddaadu leedahay shaqaale ama si gooni ah canshuur looga qaado, waa inaad ka heshaa Lambarka Aqoonsiga Loo -shaqeeyaha ee federaalka (EIN) IRS. Xitaa haddii aan lagaa doonayn inaad hesho EIN, inta badan waxaa jira sababo ganacsi oo sidaas loo yeelo.
Bangiyadu badanaa waxay u baahan yihiin EIN si ay koonto ugu furaan magaca meheradda iyo shirkado kale oo aad ganacsi la leedahay ayaa laga yaabaa inay u baahdaan EIN si ay u socodsiiyaan lacag -bixinta. Waxaad heli kartaa EIN markaad buuxiso arjiga onlaynka ah ee mareegaha IRS. Ma jirto lacag xereyn.
#7 Hel caymis
Markaad ganacsi ka bilaabayso Connecticut, helitaanka caymiska ganacsigu waxay muhiim u tahay ilaalinta ganacsigaaga.
Noocyada caymiska ganacsiga badankood waa ikhtiyaari, marka laga reebo caymiska magdhawga shaqaalaha ee gobollada intooda badan. Dawladaha qaarkood waxay kaloo u baahan doonaan caymis mas'uuliyadeed oo xirfadeed ganacsiyada bixiya adeegyo gaar ah iyo caymiska baabuurta ganacsiga.
Xataa haddii caymiska looma baahna, oo waxaa jira dab, xatooyo, ama dacwad dhaawac shakhsiyeed, milkiilaha meheraddu waxaa laga yaabaa inuu jeebka ka bixiyo waxyeellada iyo khidmadaha sharciga. Ganacsiyada guryaha ku salaysan iyo dhinacyada-ganacsiyada waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu tixgeliyo caymiska ganacsiga, sidoo kale, maadaama xeerarka guriga iyo baabuurka shaqsiyeed aysan dabooli karin haddii ay dhacdo khasaare ganacsi.
Connecticut LLC vs Shirkadda
Dhaqan ahaan, milkiilayaasha ganacsiyada yaryar waxay door bidaan LLC- waxay leeyihiin shuruudo sannadle ah oo yar, maarayn dabacsan, iyo ikhtiyaaro canshuureed oo weyn kuwaas oo u sahlaya inay maareeyaan.
Shirkadaha sida caadiga ah waxay u baahan yihiin dayactir dheeraad ah laakiin waxay soo jiidanayaan milkiilayaasha ganacsiga waaweyn ee raba inay ka iibiyaan saamiyada maalgashadayaasha. Qaab dhismeedka ganacsi ee la aasaasay, oo si wanaagsan loo qeexay ayaa sidoo kale soo jiidasho leh.
Laakiin, maxaa ku saabsan Connecticut? Ma jiraan faa'iidooyin Connecticut LLC vs shirkad Connecticut?
Guud ahaan, Connecticut LLC-yadu way ka raqiisan yihiin kana fudud yihiin in la ilaaliyo marka loo eego shirkadaha Connecticut. Qiimaha xaraynta Shahaadada Ururku waa $120 marka la barbar dhigo $250 Shahaadada Isku-dhafka.
Sidoo kale, haddii shirkaddaadu ay ogolaato in ka badan 20,000 oo saamiyo, waxaad ku dambayn kartaa inaad bixiso kharash xarayn sare leh. Labada hay'adood waxaa laga rabaa inay soo gudbiyaan warbixin sannadeedka; si kastaba ha ahaatee, LLC-yadu waxay bixin doonaan si aad uga yar kuwa shirkadaha-$80 vs $150.
Shirkadaha Connecticut waxay sidoo kale u muuqdaan inay si adag u dhacaan inta lagu jiro xilliga canshuurta - bixinta 7.5% dakhligooda sanadlaha ah - oo lagu daray 10% dheeraad ah haddii dakhligu ka sarreeyo $ 100 milyan.
Heerka dakhliga shakhsi ahaaneed wuu kala duwanaan doonaa laakiin wuxuu sare u kacayaa 6.99%. Sidoo kale, maskaxda ku hay in shirkadaha inta badan ay ku xiran yihiin canshuur labanlaab ah.
Haddii aad bilowdo Connecticut LLC ama shirkad Connecticut waxay runtii ku xirnaan doontaa yoolalkaaga ganacsi ee gaarka ah.
Haddii aad rabto inaad soo jiidato maal-gashadayaasha oo aadan maskaxda ku haynin kharash yar oo sarreeya, markaa shirkaddu hubaal waa doorashadaada ugu fiican. Laakiin, haddii lahaanshaha ganacsi yar uu ka badan yahay yoolkaaga, markaa waa inaad tixgelisaa Connecticut LLC.
Shirkadaha ugu sareeya ee Connecticut
Maadaama ay tahay dawlad loo dhan yahay oo ganacsi, shirkaduhu had iyo jeer waxay raadiyaan inay ganacsigooda ka dhisaan jawi u saamaxaya ganacsiyada inay koraan oo hal -abuurnimadu horumar sameeyaan. Waa kuwan liiska 15 -ka ganacsi ee ugu sarreeya Connecticut:
Qalabaynta Adeegga XPO
Shirkadda wiishka Otis
Shabakadda Caafimaadka ee Western Connecticut
Nestle Waters Waqooyiga Ameerika
Warshadaha Caalamiga ah ee Harman
Iyadoo ay ka badan yihiin 500 oo shirkadood, bilowga hormuudka ah, hoggaamiyeyaal la aasaasay, hal-abuurayaal soo ifbaxaya, kheyraadka dabiiciga ah, kheyraadka dhaqanka, iskuulada heer qaran leh, iyo jawi shaqo oo wax soo saar leh oo ku yaal Connecticut, gobolku wuxuu weli u furan yahay fikradaha asalka ah iyo fikirka cusub ee u oggolaanaya ganacsiyada inay horumar sameeyaan.
bilawga ganacsigaaga.com - Tilmaan Bilowga Meheradda Connecticut
nolo.com - Ka bilow meherad kuu gaar ah Connecticut: Toddobo Tallaabo oo Aad U Baahan Tahay Inaad Qaado
portal.ct.gov - Waaxda Adeegyada Dakhliga ee Gobolka Connecticut
Waa maxay Magaca Ganacsiga ee Ganacsiga? Diiwaangelinta, Hababka
Ma qori karaa jeeg nafteyda? Hagaha Fudud ee 2022
10 Barnaamijyada Shukaansiga Bisexual ee Bilaashka ah 2022
Sida loo iibsado Samsung Stock Direct 2022
Iibsashada saamiyada shirkaddu waa maalgashi. Markaad iibsatid saami saamiyeed, waxaad leedahay…
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Aasaasaha iyo Maamulaha Guud? | 2022 Jawaabaha ugu Fiican
Way fududahay in lagu dhex milmo lingo shirkadeed. Inta udhaxeysa aasaasaha, agaasimaha guud, iyo mararka qaarkood Madaxweyne kuxigeenka, Maamulka ing
Waa Maxay Lacagta Ugu Qiimaha Badan Hadda
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay tahay lacagta ugu qiimaha badan? Si fiican u akhri. Lacag ururintu waxay ahayd…
10 Barnaamijyada Sawir -gacmeedka ugu Fiican ee loogu talagalay Chromebook sannadka 2021 -ka
Isticmaalayaal badan ayaa aamminsan in barnaamijyada sawir -qaadista ee Chromebook aysan caawinin hal -abuurka sababta oo ah waxay la'yihiin tayo. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa…